Mashruuca - Cangzhou Ruichen Electronic Equipment Co., Ltd.
Kani waa bandhigga gacanta ee dayactirka hore ee la dhigay qolka shirarka. Cabbirka guud ee shaashadu waa 5120 × 1280mm screen Shaashadan soo -bandhiggu way fududahay in la isticmaalo oo la joogteeyo, oo leh sagxad sare iyo muuqaal cad, oo ay aad u ammaaneen macaamiisha Cape Town.
Kani waa bandhig bannaanka la dhigay aagga Johannesburg. Bandhigani wuxuu leeyahay saamayn aad u fiican oo ka hortagga miridhku iyo ka-hortagga daxalka, oo qiimayntiisa biyuhu waxay gaari kartaa IP65.
Kani waa set kirada gudaha ah ee p3.91 shaashadaha soo qaloocan. Bandhigyada yar-yar ee gudaha ah, waxa ugu muhiimsan ayaa ah fidinta shaashadda. Arc-ka golaha wasiirada qaab-dhismeedka leh ayaa loo hagaajin karaa si aan kala sooc lahayn, oo kala-soociddiisa arc waa 10 ° arc gudaha ilaa 15 ° arc dibadda ah.